खुशीको कुरा नङमा हुने फंगस रोगको सफल उपचार, थाहा पाई राख्नुहोस्
सेप्टेम्बर 8, 2019 सेप्टेम्बर 8, 2019 साइन्स इन्फोटेक2Comments डा. राम बहादुर बोहरा, नङ, फंगस रोग
खुशीको कुरा नङमा हुने फंगस रोगको सफल उपचार, थाहा पाई राख्नुहोस् ! आजकल यो हरेक घर-घरमा देख्न सकिन्छ । विगद लामो समयदेखि यो रोगको घरेलु उपचार कसरी सम्भव छ भनेर हेरि रहेको थिए तर यसको सफल उपचार पाएको थिएन् । आज मैले अनौठो खालको जडिबुटी औषधि र भिक्स लिएर आएको छु । सुन्दा हजुरलाई अचम्म लाग्न सक्ला तर यो हकिकत हो शंका नगरी प्रयोग गर्नुहोला पक्कै फाइदा हुनेछ यसमा दुईमत छैन ।
हामीले आफ्नो लागी कुनै पनि औषधिको रिसर्च गरेर राम्रो उपचार पाउन सकेका छैनौ । यो एउटा दुर्भाग्य हो । यदि हामीले आफ्नो अनुभव आदान परदान गरेर जन जनसम्म पुराउछौं भने नेपाली रोगको दलदलमा फस्ने थिएनौं । प्रसंग बस मलाई एउटा कुरा याद आयो काछ चिलाएको हुनाले लगाउन मलहम नपाएको हुँदा मैले जानी जानी भिक्स दल्न दिएको थिए ।
भोलीपल्ट भिक्स लगाउने व्यक्ति हास्दै मलाई भन्नु भयो सर हजुर भगवान हुनुहुन्छ मेरो चिलाउने रोग त गयो तर बर्सौसम्म समाधान नभएको समस्या समाधान भयो । त्यस्तो समस्या के रहेछ म पनि त बुझौ भने तर वहाँ भन्न लाज मान्नु भएकाले मैले सोधेपछि बल्लतल्ल भन्न राजी हुनुभयो । उहाँको लिङ्ग उत्यजना हुदो रहेनछ तर भिक्स भेपोरब दल्दा हिट हुन गई सेक्स गर्न सक्क्षम हुनु भएछ ।
आजको लेखमा मैले भिक्स भेपोरब र अन्य जडिबुटी आयुर्वेदिक औषधिबाट नेल फंगसको उपचार गर्नेबारे जानकारी पस्कन गइरहेको छु । हामी नेपालीको सवैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको विश्वास नगर्नु हो । अर्को कमजोरी भनेको अनुभव साटासाट नगर्नु पनि एक हो । म नै धनी बनु अरूले यस्तो कुरा थाहा पाए मेरो ब्यापार खतम हुन्छ भन्ने भर्मको सिकार हुनु ।
जब हाम्रो शरीरमा फंगस प्रवेश गर्न थाल्दछ तब यसले इम्युनिटी सिस्टमलाई कमजोर बनाउदै सवै शरीरमा फंगसले आफ्नो डेरा जमाउन थाल्दछ । यहाँ हामीले नेल फंगसको मात्र होइन यसले हाम्रो सम्पुर्ण छालामा अटेक गर्दै जान थाल्दछ । कतिपय अवस्थामा एलोपैथिक उपचारबाट पनि यो फंगस निको नहुन सक्छ । दादको उपचार सहि नभएमा क्यान्सरको रूपमा परिणत पनि हुन सक्छ । आउनुहोस् नेल फंगसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानौं।
१. VICKS VAPORUB बजार वा क्लिनिकबाट खरिद गरेर ल्याउनुहोस् । यो नसोच्नुहोस् कि भिक्सले के निको हुन सक्छ । भिक्स दैनिक नङमा दल्नुहोस् क्रमश: निको हुन्छ ।
२. दुई तिन लहसुनको केसरीलाई पिस्नुहोस् र केस्टर आयलमा मिलाउनु होस् र फंगसको एरियामा लगाउनुहोस् । केहि समयपछि धुनुहोस् नेल फंगस निको हुन्छ ।
३. काँचो हलेदोको रसलाई फंगसको एरिया दल्नुहोस् र २,३ घण्टापछि धुनुहोस् । राती हरेक दिन एक चमच हलेदो पाउडर एक गिलास दुधमा राखेर खानुहोस् दाद सवै निको हुन्छ । यस्ले इम्युनिटी पावर बढाउनुको साथै शरिरबाट फंगस निकालेर फाल्नेछ ।
४. फंगसको इन्फेक्सन शरीरबाट हटाउन दैनिक एउटा नीबुवाको रसलाई गरम गर्नुहोस् र गरम गरेको नीबुवाको रसमा मह र ज्वानोको पाउडर मिलाउनुहोस् र रोज खानुहोस् फंगसको दोहलो हुनेछ ।
५. दैनिक बिहानै २० वटा नीमको पातको रस निकालेर खाली पेट १०,१५ दिन सेवन गराउनाले सवै फंगस दाद निको हुन्छ । सवै प्रकारको छाला सम्बन्धी रोगमा उपयोगी छ ।
कान पाक्ने रोग र यसको उपचार
औषधि सेवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
एन्टीबायोटिक्स भनेको के हो ?
एन्टीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन र यसको प्रयोग
निमेसुलाइड टेब्लेट (Nimesulide Tablet) र यसको प्रयोग
← वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए यौन सम्पर्क गर्ने उपयुक्त समय
आइतवार सुर्यदेवको पुजा गरेमा मिल्नेछ चमत्कारी लाभ →
रक्सी सेवनका नकारात्मक असरहरु
नोभेम्बर 17, 2018 नोभेम्बर 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
रुघाखोकीको घरेलु उपचार
डिसेम्बर 15, 2018 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
2 thoughts on “नङमा हुने फंगस रोगको सफल उपचार”
Pingback: यस्तो हुन्छ साइटिका नर्भको समस्याको लक्षण र उपचार, थाहा पाईराख्नुहोस्
Pingback: डेंगु भन्दा स्क्रब टाइफसका बिरामी धेरै, स्क्रब टाइफस डेंगुभन्दा घातक रोग